Ngabe amaBlogger angaba yiFourth Estate? | Martech Zone
Ngabe amaBlogger angaba yiFourth Estate?
NgeSonto, ngoMashi 8, 2009 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
I-Nobility yiFirst Estate, iSonto lingelesibili, abantu bangabesithathu… kanti ubuNtatheli bekuhlale kucatshangwa ukuthi yiFourth Estate. Ngenkathi amaphephandaba eqala ukulahla intshisekelo yokuba yinja yokubuka abantu futhi - esikhundleni salokho - agxile enzuzweni, abashicileli baqala ukubheka ubuntatheli njengokugcwalisa phakathi kwezikhangiso kunenjongo yokuphila.
Siyaqhubeka nokubona ukuphela kwamaphephandaba yize ithalente lobuntatheli lingazange lishiye - yinzuzo kuphela eyashiya. I- iphephandaba iwashi lokufa iyaqhubeka. Kungiphatha kabi ukubona izintatheli eziningi ezinamakhono zokuphenya zilahlekelwa yimisebenzi. [Isithombe esivela ku-The Economist]
Bekukhona intatheli emcimbini wakamuva engikhulume nayo yangibuza ukuthi ngabe yini ezobhuloga ngayo emhlabeni uma izoqala. Ngamtshela ukuthi ngibheka ukubhuloga nobuntatheli njengezindlela ezimbili zokuxhumana ezihluke kakhulu. Ngokubona kwami, i-blogger yilowo owabelana ngamakhono akhe noma okuhlangenwe nakho kwakhe ku-intanethi. Ukubhloga kudume kakhulu ngoba kusika umkhiqizi, umhleli futhi intatheli… bese ubeka izethameli ngqo phambi kongoti.
Ngakho-ke ibhulogi yezintatheli ibingathini?
Ngincome ukuthi abhale nge-journalism. Izintatheli zingabantu abanamakhono amahle futhi abanesibindi. Bakha izindaba zabo ngokuhamba kwesikhathi, ngokuzikhandla okukhulu futhi bemba ukuthola amaqiniso. Yize ama-blogger enza izindaba ngezikhathi ezithile ngokuba yinja yokubuka, angikholwa ukuthi kukhona nedlanzana nje elingafana nethalente izintatheli elinazo - hhayi ekubhaleni nje kuphela, kepha ezihamba odakeni ukungena eqinisweni.
Uma ezinye izintatheli zingabelana ngolwazi lwabo lobuciko babo nge-blog - futhi nokuqonda okuthile ukuthi yiziphi izindaba abasebenza kuzo - futhi banikeze amathuba okuqeqesha nokubhalisa ama-blogger, kungaba nethemba lokuthi iFourth Estate izophila ngayo. Ngiyethemba ukuthi uzoyiqala ibhulogi futhi aqale ukufundisa yonke enye indawo ye-blogosphere ukuthi singaba kanjani abaqaphi abangcono.
Izwe elisabekayo ngaphandle kweFourth Estate. Kusobala ukuthi imithombo yethu yezindaba ejwayelekile ishiye isikhundla sayo ezinyangeni eziningi ezedlule njengezimpawu zamadola, abaninimasheya, kanye nethonya lezepolitiki okudlule ukubaluleka kobuntatheli obukhulu. Ngangikhona lapho siqala ukukhangisa leli phephandaba ngokuthi mangaki amakhuphoni ayekhona kulo hhayi izintatheli ezinethalente onikezwe ukufinyelela kuzo.
UGeoff Livingston wabhala ekuqaleni konyaka ukuthi abezindaba bezakhamizi yiThe Fifth Estate. Mhlawumbe lokho kuliqiniso, kepha anginaso isiqiniseko sokuthi ngandlela thile sikufanelekele ukuthatha indima noma umthwalo onjalo.
Hlola Isu Lakho Lokuqukethwe nge-Google Search Console
Ukulandelela Ukubukwa Kwethebhu ku-Google Analytics
Mar 10, 2009 ku-2: 26 PM
Ngicabanga ukuthi umngani wakho uzokujabulela ukubhloga ngoba uzoba nenkululeko yokubhala lokho akutholayo futhi akholelwe kukho. Angiqondile ukuthi ukuhlela okuhle akuyona into enhle enganikezwa yifa lesine; kubonakala sengathi sekwephuzile, akunjalo. Kunenani elikhulu kakhulu lokubhala okuhle nolwazi oluvela emphakathini wokubhuloga nodoti omningi; ukuba ngumfundi onekhono futhi oqondayo kubalulekile.